Akwụkwọ | ODgbụrụ YingTESHENG ahịhịa na ahịhịa eme CO., LTD
Na 2005, iwebata teknụzụ na igwe nyere YTS ohere ịbawanye azụmaahịa ya iji tee ebe ncha. N’otu afọ ahụ, YTS guzobere isi ụlọ ọrụ ya — onye na-emepụta ihe na Qingyuan Industrial Park, mpaghara dịpụrụ adịpụ nke Baoding, Hebei. Ọ nwere ihe karịrị 700,000 square ụkwụ, nke a kpụrụ site na osisi na-eme bristle, filament ịbịaru osisi, na-eme ngalaba, na-eme ahịhịa.
YTS nwere ihe karịrị ndị ọrụ 300, gụnyere ndị ọkachamara ọkachamara, ndị injinia. Anyị nwere ikike ịzụlite akụkụ ọhụrụ na ngwaahịa iji nye ndị ahịa ngwaahịa kachasị mma. Anyị na-enwe ngwa ngwa nnyefe na mgbe-ire ọrụ aka anyị asọmpi. Anyị na-ejere ndị ahịa anyị ozi n'ụzọ na-agbanwe agbanwe na n'oge. Isi ihe mgbaru ọsọ nke YTS bụ ịnọgide na-azụlite ngwaahịa ọhụrụ, melite ogo, belata ụgwọ, ma chee ndị ahịa kachasị mma na ọnụahịa kachasị asọmpi.
Ntak emi Họrọ YTS?!
N'ime afọ iri atọ, "àgwà kachasị elu" ka a zụrụ azụ n'ọrụ ndị ọrụ. Anyị elu-mma brushes na-enweta a na-ekpo ọkụ welcome si ahịa n'elu ụwa.
YTS nwere ihe karịrị ndị ọrụ 300 nwere mmepụta nke katọn 20,000 bristle na nde 30 na-ehicha kwa afọ. Ọtụtụ n'ime ndị na-ehicha YTS nwere ihe karịrị afọ iri abụọ, na-ewere ihe ndị kacha mma ma gbanwee ha n'ime brushes kachasị mma dị.